Cuba: USA ha naga qaado cunaqabateynta - BBC News Somali
Cuba: USA ha naga qaado cunaqabateynta
15 Agoosto 2015
Image caption Calanka Mareykanka oo laga taagay Havana, Cuba.
Dowladda Cuba ayaa Mareykanka ugu baaqday inuu ka qaado cunaqabateynta dhanka ganacsiga ah, kaddib markii shalay caasimadda Havana dib looga furay safaaradda Mareykanka oo xirneyd muddo ka badan 50 sano.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka, John Kerry, ayaa qiray in ay guuldareysatay siyaasaddii dalkiisa uu ku takoorayay Cuba, isla markaana ay wax ka qaban weyday xisbiga shuuciga ah ee lagu eedeeyo in uu aamusiyo kuwo siyaasaddiisa dhaliilsan.
Balse Mr Kerry ayaa sheegay in Cuba ay hadda ka faa’iidi doonto dimuqraadiyada, Mareykankuna uu isha ku hayn doono xadgudubyada xuquuqda aaddanaha ee Cuba.
Wasiirka arrimaha dibedda Cuba, Bruno Rodriguez, ayaa difaacay xuquuqda aaddanaha ee dalkiisa, asagoo sheegay in Cuba aanay ka jirin boolis dadka iska laaya, midab kala sooc iyo jirdil.
Labada dal ayaa la filayaa in bisha September ay bilaabaan wadahadal ku aaddan xal u helida arrimaha ay isku khilaafsan yihiin. Balse Mr Kerry ayaa sheegay in congress-ka dalkiisa aanu Cuba ka qaadi doonin cunaqabateynta dhaqaalaha, ilaa iyo inta uu dalkaasi isbedel muujinayo.